Khilaafyada madaxda Dowladdihii u danbeeyay
Sadexdii sanno ee u danbeeyay waxaa madaxda dowladdihii u danbeeyay hadheeyay khilaaf ba'an oo burbur dhaliyay.
Khilaafyadan oo inta badan u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul-wasaaraha ayaa hadheeyay howlaha dowladda, waxayna ku salaysan yihiin muranno ka dhasha qodobadda axdiga KMG oo dhinac walba u si gaar ah u fasirto kuna dooddo inuu kan saxda ah ku taagan yahay.
Khilaafyadan waxay keenaan in dhinac walba uu taageero ka raadsado baarlamaanka KMG, iyadoo xitaa ay sababto faragelin ay madaxda dowladda soo dhexgalaan wadamada dariska.
Sadexdii sano ee u danbeeyay waxaa dowladdihii KMG si weyn u aafeeyay khilaaf dhaliyay in uu burbur ku yimaado gabi ahaan. Madaxweyne Yusuf ayaa waxaa soo wajahay khilaaf ba'an oo isaga iyo ra'iisul-wasaarayaashiisii dhexmaray, taasoo gabi ahaan kaliftay in uu isagu baneeyo jagada madaxweynenimo, isla markaana dowladdii KMG ay sidaasi ku burburto.
Khilaafka haatan jira ayaa u muuqda mid la mid ah kii madaxweyne Yusuf iyo ra'iisul-wasaare Geedi iyo ra'iisul-wasaare Nuur Cadde, waxaana dadka saadaaliyaa arrimaha Somalia ay tilmaamayaan haddii aan khilaafkan xal loo helin inuu burbur ku keeni karo dowladda KMG.
Qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso warbixin dheer oo ka hadlaysa khilaafyada soo dhexmara madaxda dowladdaha KMG.
Warbixinta khilaafyada dowladda KMG